Co2 fractional icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname imigca enqamlezeneyo rejuvenation yolulela marko nokususwa vaginal rejuvenation umatshini cl-10-icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname ubuhle umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
I-Fractional Laserit inokunikezela ngeendlela zokuskena okunamandla kunye nokuskena okungahleliwe phantsi kwendlela yokusebenza "yefomathi yokukhupha". Inkqubo elawulwa nge-microprocessor kunye ne-scanical optical eyenziweyo yenza ukuba iziphumo ze-laser lattice, imilo kunye nobunzima zihlengahlengiswe ukwakha iindlela ezahlukeneyo, ezenza ukuba unyango lube lula kwaye lujolise ngakumbi. Itekhnoloji ekhethekileyo yokulawulwa kokukrekhwa elawulwa ngokungekho mthethweni iqinisekisa ukuba zonke iindawo zonyango zinexesha elaneleyo lokuphola, zithintele ukwenzakala kwesikhumba okubangelwa kukuqokelela kobushushu ngexesha lonyango, kwaye kuncipha ngomgangatho wempembelelo efanelekileyo ngelixa kusonyuswa isiphumo sonyango.
Ukuhamba kwegazi okuphuculweyo kunye nethoni yokuncipha kunciphisa iintlungu, kuphucula ukusebenza ngokwesondo kunye nokuchama kwaye kunokonyusa ukwaneliseka ngokwesondo.Unyango ngokwalo luyingozi ephantsi, alunazintlungu, kwaye lufanelekileyo kwabasetyhini abaninzi. Iziphumo zeklinikhi zibonisa ukuba unyango olukhawulezayo nolula lwasekhaya lobufazi yinto esebenzayo, engathumeliyo kwaye ineziphumo ezibi ezingafunekiyo kunye nokuchasana.
I-vagina epinki - Ukuvuselelwa kweVulva, ukukhanya kwemibala kunye namalungu ebala leepinki, isidanga esibuthathaka ukuphucula i-70%
I-USA ingenise ityhubhu yesinyithi yeRF, icompact kunye nayo yonke itywina elitywiniweyo, ukusebenza okuzinzileyo, amandla aphezulu, akukho ndleko zinokuselwa.
Inkqubo emi-2 kwenkqubo enye: i-laser yokuhlinzwa, i-laser yokwaleka, i-laser yelungu lobufazi.
3. Inkqubo yokuhanjiswa kwe-laser eyi-7 edibeneyo yenza umsebenzi oguqukayo kunye neendleko zamandla amancinci.
I-4 intshi yinyani yebala ye-LCD yokuchukumisa isikrini, ulawulo lwesoftware enabantu.
5. Iindlela ezi-3 zokukhetha ukuphuma kwe-laser: ukungqubana, ukuskena okulandelelanayo kunye nokuskena kwe-discrete kuzo zonke iimfuno zokuhlinzwa.
6. Ukuskena i-lens yentsimi ukuze kubengcono ukuiskena kweflethi. Isithuba se-0.1mm.
8. Sebenzisa ibheram ejolise kuyo ejolise ngqo kwindawo yonyango.
9. Inhale kunye nenkqubo yomoya yokudambisa inokuthi yakhiwe ngaphakathi.
I-1-40W (I-pulse eyodwa) 1-120W (Ipulse enkulu)
I-10.4 "isikrini sokuchukumisa
≤0.1mm (FFLS)), ≤0.2mm (HFLS)